Xildhibaan Fidaar: “Cabashada Shacabka Hargeysa waa mid u baahan in wax laga qabto”. | Dayniile.com
Home Warkii Xildhibaan Fidaar: “Cabashada Shacabka Hargeysa waa mid u baahan in wax laga...
Xildhibaan Fidaar: “Cabashada Shacabka Hargeysa waa mid u baahan in wax laga qabto”.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Fidaar oo xubin ka ah Golaha Deegaanka Hargeysa ayaa eedeyn la dul dhacay Maayer ku xigeenka Magaaladaas kaddib markii ay korortay Cabashada Shacabka ee dhanka waddooyinka.
Waxa uu shaaciyay in maayer ku xigeenka aanay lahayn “Khibrad la xiriirta shaqadiisa gaar ahaan dhismaha waddooyinka” maadaama ay taagan tahay cabashada Shacabka oo u baahan in wax laga qabto.
Xildhibaanka Cabdiraxmaan Fidaar ayaa yiri “Caasimaddu waxa ay u baahan tahay dedaal dheeraad ah, in Dadka la isku wado ayaa ugu muhiimsan, Maayer ku xigeenka Hargeysa malaha khibrad badan, Waa Nin dhalinyaro ah oo dedaalayo balse cabasho badan ayaa Bulshada nooga timid”.
Cabdiraxmaan Cabdullaahi Fidaar ayaa tilmaamay in qorshaha uu yahay in muddo kooban kaddib ay Hargeysa ka dhisaan waddooyin casri ah oo biyo xireenno loo sameynayo si ay uga badbaadaan Daadadka burburinaya.
“Waxa aan howsheedu geli doonnaa waddooyin casri ah oo leh Biyo mareeno, qalab ay leedahay Dowladda hoose waynu keenay waana dedaaleenaa, waxa aan furi doonnaa waddoyinka xiran” ayuu yiri Cabdiraxmaan Fidaar oo xubin ka ah Golaha Deegaanka Hargeysa.
Dhibaatooyinka ugu badan ee ka taagan Magaalada Hargeysa waa Bilicda, xal u helista daadadka roobka & furitaanka waddooyinka xiran, dhowr jeer waxaa arrimahaas cabasho kasoo gudbiyay Shacabka Magaaladaas.
Previous articleMid Kamid Ah Dalalka Yurub Oo Ogolaaday In Lagu Galo Baasaboorka Soomaaliya
Next articleTahriibayaal ku xiran Liibiya ” Waxaa na heysta Cunno la’aan, Biyo la’aan, Musqul la’aan & Daryeel xumo”.
laba musharax oo u tartamayay kursiga tirsigiisa yahay #Hop233 oo ay utaagnaayeen ilaa shan musharax ayaa sheegay in doorashada ay qaadaceen , waxayna isaga...